Nitoraka bilao ny manampahefana Okrainiana tamin’ilay famonoana mpanao gazety, niakatra ambaratonga ambony kokoa ny ‘vaovao faikany’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Jona 2018 5:41 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, عربي, Français, English
Arkady Babchenko tany Tskhinvali, Georgia, tamin'ny taona 2008. Sary avy amin'ny olona tsy nitonona anarana via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.
Nivoaka tamin'ny 29 mey 2018 ny famonoana an'i Arkady Babchenko, mpanao gazety rosiana, ary maro ireo seha-baovao nitatitra fa niaritra ny ratran'ny tifi-basy miisa telo mahafaty avy ao an-damosina tao amin'ny laharan-tranony ao Kyiv i Babchenko.
Nahatohina an'izao tontolo izao ny vaovao, ka nahatonga ireo mpitarika ao amin'ny media sy ny governemanta naneho ny fahatafintohinany sy ny fiaraha-miory tamin'ny vadiny sy ny zananivavy — mandra-pahatonga ny namoahana, andro iray monja nanaraka izany, fa faikany ilay famonoana olona.
Tao amin'ny valandresaka hoan'ny mpanao gazety tamin'ny 30 mey, navoakan'ny manampahefana okrainiana i Babchenko, hita mazava ho salama tsara sy tsy maninona, ka tohina daholo ireo rehetra nanodidina azy. Nanazava tamim-pireharehana ny manampahefana fa ny SBU no nikarakara ilay toe-javatra, SBU no sampam-pitsikilovana ao Okraina, ary natao izany ho ao anatin'ny bemidina manokana hanakanana ny lazaina ho tetidratsy hamonoana an'i Babchenko sy ireo Rosiana 30 hafa nandositra noho ny antony ara-politika ho ao Okraina sy ireo firenen-kafa.
VAO IZAO: VELONA I BABCHENKO. Tsy mampino izany. Velona i Arkady Babchenko! Ato amin'ny laharan-tranony aho izao ary mitomany miresaka momba azy ny mpifanolo-bodirindrina aminy raha nampandehandeha azy eo anoloan'ny fakantsarin'ny TV ny sampan-draharahan'ny fiarovana ao Okraina.
Mpanangom-baovao amin'ny ady sady mpitsikera mamaivay ny politikan'i Vladimir Potinina, nandositra an'i Rosia i Babchenko tamin'ny taona 2017 taorian'ny tsanganana iray tao amin'ny Facebook nandavany ny hisaona ireo lasibatry ny fianjeran'ny voromby iray nahafaty olona. Nahatonga azy ho lasibatry ny fanentanana propagandy ao amin'ny fampitam-baovaom-panjakana rosiana izany sy niteraka fandrahonana ho faty maro.
Araka ny nolazain'ny lehiben'ny SBU, Vasyl Gritsak, dia baiko avy amin'ny sampan-draharaham-piarovana rosiana, izay naka menavazana avy amin'ny tafika okrainiana iray, amin'ny alalan'ny mpiantoka asa iray ao an-toerana, ny hamonoana an'i Babchenko. Notaterim-baovao fa $40.000 ny sandan'ny fanatanterahana ny famonoana.
Lazaina ho nandamoka moa izany ny tetika rehefa nanapa-kevitra ny hiaraka hiasa amin'ny mpampihatra lalàna okrainiana ilay menavazana nifanarahana hamono olona ary lasa vavolombelona amin'ny fitsarana amin'izao fotoana izao. Mba handresen-dahatra ireo nanomana ny tetidratsy hamonoana an'i Babchenko fa nahomby ny tetika, dia nanafaikany ny sarin'ilay mpanao gazety ‘maty’ ny SBU, nofenoina ran-kisoa, araka izay nolazain'i Babchenko tenany nandritra ny valan-dresaka.
Hita ho mientanentam-pandresena tokoa ireo mpiasan'ny sampan-draharahan'ny fiarovana okrainiana nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety ka hitan'ny mpanao gazety sasany ho mahasadaikatra izany:
Azo itokisana tokoa, fantatry ny sampan-draharaham-piarovana fa hetsika tsy mahazatra sy mahatohina ao anatin'ny tanjona mendrika izy ity. Tsy hisanda ohatrinona akory ny valandresaka matotra ho an'ny mpanao gazety tsy ahitana sompirana fandresena, fahazoana isa na horakoraka ary ho lasa lavitra mba hahatonga azy ho ekena ara-drariny? (5/8)
Boramena ireo mpanao gazety hafa taorian'ny fizaràna fiaraha-miory sy nilaza haingana ny heverina ho vaovao tena nampalahelo tokoa tamin'ny fotoana:
Tamin'ny fandaingàna tamin'ny fampitam-baovao, nanadala ny rehetra hitatitra ny “famonoana olona” omaly i Babchenko sy ny manampahefana okrainiana. Miala tsiny amin'ny mpanjohy ahy rehetra aho tamin'ny fampielezana izay lasa zava-tsy alehany tanteraka. Ny lesona eto dia ny tsy itokisana ny tatibaovao avy ao Okraina.
Nanangana ny ahiahiny amin'ny fiantraikan'ny dona nataon'i Babchenko sy ny SBU amin'ny fitokisana ny fampitam-baovao amin'ny ankapobeny i Nataliya Vasilyeva avy ao amin'ny Associated Press:
Lava ny lisitry ny zavatra atsipin'ny olona eo anoloan'ny mpanao gazety (tafiditra amin'izany): mandainga ianao, aolanao izay lazain'ny olona, tsy mahalala andraikitra ianao. Ankehitriny ny olona miteny amiko: ary ianareo ry zalahy fikafikao ihany koa ny fahafatesanareo! Iza no mahalala raha tena maty tokoa (ilay mpanao gazety novonoina)
Nanimba hatramin'ny lalina ny ny fitokisana ny manampahefana sy ny mpanao gazety okrainiana ny toe-java-mitranga. Ary ao amin'ny faritra efa mihaohao aoka izany ny “vaovao faikany” sy ny fandisoambaovao, ny fikaroham-baovao nisy lasa faikany na novaina no manasarotra kokoa kokoa ny asa ho an'ny mpanao gazety te-hitatitra ny [vaovao] marina.
Ahiahy mitovy amin'izany ihany koa no natsangan'ny mpanandratenin'ny fahalalahan'ny fampitam-baovao. Nitsikera ny fanapahan-kevitry ny manampahefana rosiana i Harlem Desir, solontena misahana ny fahalalahan'ny fampitam-baovao ho an'ny OSCE (Fifandaminana ho an'ny Filaminana sy ny Fiarahamiasa ao Eoropa):
Misento fa velona i Arkadiy Babchenko! Mampalahelo ahy ny fanapahankevitra hampiely vaovao diso momba ny fiainan'ny mpanao gazety iray. Adidin'ny fanjakana ny manome torohay marina amin'ny vahoaka.
Namoaka hafatra mitovy amin'izany ny Komity ho Fiarovana ny Mpanao Gazety:
Ny zavatra fantatra aloha dia nanomba ny fitokisana azy ny governemanta okrainiana. Ary satria moa sampam-pitsikilovana ny SBU, izay nirotsaka tao amin'ny famadihana, fanasarotan-javatra, sy propagandy, ho sarotra ny famantarana ny marina.
Taorian'ny fiverenan-ko velona indray, nanoratra tao amin'ny Twitter i Babchenko fa “leo” ny miala aina izy:
Iny ny an'ireny. Tsy hanome fahafaham-po ho azy ireny aho. Efa nanao fampanantenana ho faty amin'ny faha-96 taonako aho, aorian'ny andihizako eo ambony fasan'i Potinina sy hakako selfie ambonin'ny fiara mifono vy Abrams eo amin'ny lalana Tverskaya [Lalambe afovoan'i Moskoa] — ary hanao izay faraheriko aho hanatanterahako izany. Tena anjarako mihitsy ny miverina avy amin'ny fahafatesana isaky ny efa-taona. Andriamanitro ô, mankaleo ny miala aina. Arahaba maraina.
Mbola miantona ny famotorana amin'ny lazaina ho tetidratsin'i Rosia hamono an'i Arkady Babchenko.